Iimagazini zeGeomatics -Ukufakwa kwinqanaba le-40 ephezulu-yeGeofumadas
Agasti, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka, Geospatial - GIS
Iimagazini zeGeomatics ziye zavela ngokuthe ngcembe ngesingqi sesayensi, inkcazo yayo ixhomekeke kakhulu kwinkqubela phambili yetekhnoloji kunye nokuhlanganiswa kwamacandelo ojikeleze isayensi yomhlaba. Imikhwa yangoku ibulele iimagazini ezishicilelweyo, iphinde yahlaziya umxholo ophambili wezinye iimpapasho, kwaye yavala umsantsa phakathi kwento eyimagazini yesiqhelo eneposti yebhlog yedijithali. Ixabiso elongeziweyo kulawulo lolwazi kunye nokusebenzisana phakathi kwabadlali kuye kwabaluleka nangakumbi ngendima yomshicileli oqhelekileyo yokuhambisa ulungelelwaniso lweziganeko zamanye amazwe, inkonzo yewebhu kunye nokupapashwa komxholo wedijithali.
Ukutsho ukuba zeziphi ezona ziphezulu zingama-40 kukungakhathali, ngakumbi ukuba bazakubekwa ngokweendidi. Ke ngeli xesha ndiza kusebenzisa ezinye iikhrayitheriya ezixhasa umlinganiso ongathathi cala, ndicacisa ukuba ayizizo zodwa iimpapasho ngalo mbandela kodwa kulindeleke ukuba ibe sisiqalo kubathandi bokufunda kunye neenkampani ezijonge imeko yokusasazeka.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba ifomathi "yemagazini" ayisiyiyo le siyiqondileyo ukuza kuthi ga ngoku, mhlawumbi kungangcono ukuthi "kupapasho kwi-geomatics" kuba namhlanje ngaphezulu kokuxabisa ifomathi sinika amanqaku ngakumbi kuluncedo lweendawo ze-Intanethi. kwiindlela zayo ezahlukeneyo; iiforamu, iibhlog, iipothali, iileta zeendaba, ii-wikis ... ngokudibeneyo.
Ndisebenzisa ukulinganisa Alexa, yomhla ka-Agasti 15, 2013. Olu luhlu luyatshintsha kwaye luyatshintsha ngokuhamba kwexesha kuxhomekeka kwindlela elungileyo okanye engalunganga yewebhusayithi kunye nohlengahlengiso lweendlela zokuziphatha zikaGoogle.
Ngokuqhelekileyo, akufani nababali okanye iindwendwe, kodwa yindlela yokubeka impilo kwindawo.
Ezantsi inqanaba le-Alexa, kungcono, yiyo loo nto uFacebook.com kunye noGoogle.com zihlala zikumanani amabini okuqala. Akululanga kangako ukuba ngaphantsi kwe-100,000 ephezulu kwaye nangona kukwimo yokubeka ilizwe kule meko ndikhethe ukuyenza ndisebenzisa umhlaba wonke, ebonisa kwitafile isikhundla seSpain njengolwazi olongezelelweyo.
Ndisebenzise izithuba ezingama-40 zizonke, zihlengahlengiswe kwinqanaba elingaphantsi kwe-7,000,000. Ngelixa eso sisikhundla esibulalayo kwisiza, ndisandisile apho ukuze ndikwazi ukulinganisa ukukhula kwamaphephancwadi afanelwe ithamsanqa elingcono.
Ama-21 ala maphephancwadi abhalwe ngesiNgesi. Uninzi luqulethwe kwifayile ye- uluhlu lwamaphephancwadi e-geomatics ukuba ndapapasha ixesha elidlulileyo; nangona ngelo xesha kukhankanywe kuphela i-9 enkulu kunye nabanye abangabonakaliyo, kubandakanywa nezinye eziphantsi kweenkampani ezibandakanyekayo ekuveliseni izixhobo okanye izicelo.
8 zivela kumxholo weSpanishi, ngokuchanekileyo abo babekwisikhundla esikumanqanaba akhethiweyo. Konke ngeSpanish, ngaphandle kweGeofumadas eneenguqulelo zayo ngesiNgesi. Nalu uluhlu luyaziwa kakuhle, kunye nokwahluka okubandakanyiweyo kwiCartografia.cl, esingazange sayikhankanya ngaphambili.
Ezisi-7 zinemvelaphi yaseBrazil, kuthathelwa ingqalelo ukuba yimeko yethu yokuhambelana. Konke ngesiPhuthukezi, kunye nolwahlulo lweMundoGEO olunenxalenye yesiNgesi kunye neSpanish. Ndicela uxolo kubahlobo bethu baseRio de Janeiro, kodwa luluhlu endiye ndakwazi ukuluchonga, ngokuqinisekileyo kukho omnye umntu onendawo engcono kulayini.
Kwaye okokugqibela ndibandakanyile i-4 yemagazini ye-5 yaseDenver esandula ukujoyina i-Location Media Alliance-LMA. ZikwesiNgesi, kodwa ezinye zazo kunye nomanyano zitshintshe amagama kunye nesizinda, ke kuye kwafuneka ukuba ziqale ukukhula kwazo phantse kwasekuqaleni; Yiyo loo nto, iiSensors kunye neeNkqubo kunye neZiseko zoLwakhiwo ezingalunganga yinto esasikade siyazi njengeVector1 kunye neVectormedia. Ngenxa yokuma kwayo, ayiveli kuluhlu lwe-Spatial Apogeo, eyayibizwa ngokuba ziiNgcombolo zokuFanisa. Kuya kuba mnandi ukubona ukukhula kwayo, kuba malunga nonyaka ophelileyo kwindawo yentselo eAmsterdam besixubusha nenye yeengcinga zayo malunga nendlela esebenza ngayo iZatocaConnect / Z! Spaces ... kwaye ekuhambeni kwexesha ndikwazile ukubona ukuba ezinye zeembono eziqulathwe kwi-LMA .
AmaBrazil aphawulwe ngokuluhlaza, ii-orange ngeSpeyin kunye ne-celeste kwi-Alliance.
Umzobo awubhekiseli kumaphephancwadi okuqala e-4 ngenxa yokuba ulahlekelwa ngumqondo wayo wokubonakala ngenxa yezinga eliphezulu phantsi kwe-100,000.
1 i-directionsmag.com 17,463 Ukusekwa eSpain
Imiyalelo yeMagazini ime ngokungathandabuzekiyo njenge-monster, enokuma okuhle kwe-17,000. Emva komzamo wakhe ongaphumelelanga kwinguqulelo yakhe yaseSpain, wagqiba kwelokuba agxile kwisikhundla sakhe esikhethekileyo kwaye wenza umanyano noMundoGEO kwikona esezantsi.
Ummangaliso wokuqala yiMaphumaniac, eyayisaziwa njengeGoogle Maps Manía, ethe kulo nyaka yenza i-domain yatshintsha kwaye nangona bengenayo ilogo ebuhlungu bazuze ukuphuculwa kwenjini yokukhangela kwiinyanga nje ezimbalwa. Uququzelelo luyamangalisa, abasebenze nzima kulo nyaka ukuba babonakale kwiinjini zokukhangela kwaye bagqithe kwindawo ezininzi.
Qaphela ukuba oku kuluqilima, unokubona indlela i-mapsmaniac ukusuka ngoMeyi iqale ngayo nge-domain yayo entsha; kunye noLawulo.
Elinye iqhosha leNgesi yi-GIS Cafe, iGis Lounge, I-GPS Yehlabathi kunye nomsebenzisi we-GIS.
Kuyanelisa ukubona indlela i-MundoGeo ifakwe ngayo kwindawo yesihlanu kunye necandelo laseSpain libandakanya iFranz Blog (9) kunye neGeofumadas (10) ngaphakathi kwesi 10 phezulu.
Apha kuvela uCartesia (11), uGabriel Ortiz (15). Mhlawumbi izizathu zokuba kutheni ezi ndawo zimbini zidumileyo zibonakala kwezi zikhundla kungenxa yokunqongophala kohlaziyo lweqonga, ukwahlulwa kweendawo kubaphathi beenkcukacha ezahlukeneyo, okanye inyani elula yokungazinikeli kwizizathu ezithi zohlwaye Google nganye ixesha elithile.
I-Solitario ibonakala ibhlogi likaAnderson Madeiros (Cofa Geo) kwindawo 14 noGerson Beltrán kwi-17.
20 gim-ternational.com 1089,629 Useka iSpeyin
Sele kuluhlu ezinye iisayithi ezimbini zolwimi lwesiPhuthukezi, iMephu yeGIS, ekhulayo emva kokunikezelwa kwaba bafana kulo nyaka, kunye neAsia Surveying & Maps, elushicilelo olunelona nqanaba liphezulu kwi-LMA. Izinzwa kunye neenkqubo zibonakala kwindawo ye-30, ucinga ukuba ligama elitsha, sikholelwa ukuba liyakukhula ngokukhawuleza kune-ASM.
22 lidarnews.com 1198,105 Useka iSpeyin
30 ii-sensorsystems.com 2147,894 -
Kwaye ekugqibeleni, emgceni zimbini ezinye iimagazini ze-LMA. Ke ndibandakanya iMithombo yeendaba yeGeospatial ngokwenqanaba elinalo, nangona le ikwayinkampani enye evela e-India evelisa i-Geo Intelligence, kwaye ikhuphe konke okuqulathwe yi-Geo Development kwesi sithuba.
Isimo seSpain nguCartografia.cl (33), i-Orbemapa (i-39) kunye neendawo ezintathu zaseBrazil.
36 ejjournal.com 3560,316
38 ulwaziinfrastructure.com 5014,245 -
Ukuqukumbela, kubalulekile ukuhlangula ubukho beendawo ze-8 zeSpanish kuluhlu oluntsonkothileyo lokulinganisa. Apho kunokwenzeka khona siya kulandelela kolu shicilelo ukufumana izifundo esizifundileyo kolu lwazi lutsha lwejenomatiki.
Indlela yokuphucula kwi-Alexa usetyenziso
Ayizonjongo zeli nqaku, kodwa ingcebiso inokuba luncedo nakubani na. Ngokubanzi, kukho amaqhinga ambalwa asebenzayo:
Ngokufanelekileyo, gwema ukusebenzisa i-subdomains; Akunjalo ukuba ube nesayithi kwi-blogspot okanye i-wordpress.com kunesizinda sakho.
Kwakhona amaziko kufuneka abhaliswe kwi-Alexa kwaye alandele amanyathelo okubamba ukubumba.
Bhala rhoqo. Ukuphulukana nexesha ekuboneni ukuba amanani ehla njani akuncedi konke konke.
Funda ngeendlela zokuphucula. Utyalo-mali kwi-SEO lukhetho olufanelekileyo, kodwa kuya kufuneka ufunde njengokuba sifunde izinto ezinzima ngakumbi kwikholeji.
Gwema iindlela zokuba zihlawulise isayithi; Omnye wabo kukushiya.
Kwaye okokugqibela: sibhalele, sinamaqhinga asisebenzeleyo. umhleli (kwi) geofumadas.com
Ngokuqinisekileyo zikhona ezinye iimagazini ezingakhankanywanga, ezinye zibekwa kwinqanaba elingaphaya komda oqwalaselweyo. Ukuba ufumana enye ... ingxelo.
Ukuhlaziywa kweli nqaku kwenziwe kwi-2019
Post edlulileyo«Ngaphambilini UkuPhathwa koMhlaba: indlela ye-LGAF
Post Next Thelekisa iGPS -Leica, Magellan, Trimble kunye neTopconOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-12 "kwiiMagazini zeGeomatics-Eyona ndawo iphambili kuma-40"
Molo, ngaphambi kokundibulela ngokundivumela ukuba ndivakalise izimvo, bendinomdla kakhulu kwindlela yokugqibela yendlela yokuphucula umgangatho kwi-alexa, inyani ndisebenza kuyo ngoku «i-newbie ngesihloko» kwaye ndiza kuthathela ingqalelo amanqaku akhankanyiweyo kwaye ndiyathemba ukuba ndingathembela kuncedo lwakho Ukuba kunokwenzeka, sele ndibhale i-imeyile yakho ye-geomfumadas, ndiza kubhala ukufumana uncedo lwakho kwaye ngokuqinisekileyo namanye amaqhinga akho, enkosi ngokwabelana ngale ngcaciso ibalulekileyo
publicacoion umdla, ndifuna ukwazi ukuba unako lula imeyili Franz xq mna ndibhale waza wathi kum, ndifuna nje ukwazi wenza njani ukuze yokukhulisa izikhundla ezininzi alexa kuya kuba kuhle ukuba ukwabelana amaqhinga zikhankanywe.
Edwin Ortega uthi:
Eyona nto inomnikelo omkhulu, uninzi ngamaphepha amaninzi okuya kutyelela, ukuba akunakukhathaza ukuba uhlaziya uluhlu okanye auqneu okanye i-5 ephezulu okanye i-10. Siyabonga ngomsebenzi wakho.
Siya kuvavanya uvavanyo lwenu.
Ayisiyo ngqongqo kuphela ukukhankanywa, endaweni yokufaka nje ibar yakho kwaye wongeza iwijethi, xa ufaka indawo yakho sele "uphucula" izikhundla, ngoko ke andizithembi i-Alexa, ndikhetha ukuphucula i-pagerank leyo. qwalasela isikhundla kwiinjini yokukhangela kwaye ukuphucula kufuna umzamo wokwenyani, ke ukuba ndikhupha ibha ngokuzenzekelayo kuqala imvelaphi yam.
Kuyinyani kakhulu. Kumava am, ndibone iisayithi zikhula ngaphandle kokukhankanywa kwiGeofumadas. Akumangalisi ukuba i-alexa ixabise ntoni kwiiveki ezimbini. Oko kuyenzeka kuba into oyixabisayo yimpilo yeziza.
Ukumkhathalela ... Kufuna okungaphezulu kunoko kukhankanyiweyo.
Akukusetyenziso oluncinane ukufumana ukutyelelwa apho indawo yokuthembeka ephezulu ikuthumela ukuba abantu abachithe ixesha kunye nomxholo.
Ngoko ke ndithi ukuba kwirenki manipulable ekubeni epapashwe kule post, ngaphandle umzamo omkhulu ndikwazile ukufumana ixabiso alithe gangqa 400000, nangona kungekho akusabalulekanga, ukuthembeka enkulu na PageRank, kunzima kakhulu ukuba aphathe kunye neendleko kakhulu Umsebenzi uphucule isikhundla.
Ewe, kukho iindlela zokunyamekela izikhombisi ezichaphazela i-Alexa. Nangona kunjalo, yayiyindlela endiyifumeneyo.
Ndiyabulela ngokukhankanywa kunye nomsebenzi owenzayo, nangona i-alexa's rankings iyabonakala kodwa ke ngenxa yoko isabalulekile, ngokucacileyo kumhla wangoku ndiphakanyisile izikhundla ezimbini.
Ndiyavumelana nokuma kwakho; Isikhundla yindlela enye yokulinganisa impilo yendawo. Kodwa ngokuqinisekileyo inkampani nganye ifumene iindlela zokwenza imali ngeendlela ezahlukeneyo zokunyaniseka ezibonisa iiplatifti zolawulo lolwazi, iinethiwekhi zentlalo kunye noluhlu lwababhalisileyo.
Mhlawumbi ngolunye usuku siya kwenza uphando olunjalo.
Alberto Santos uthi:
Okubaluleke nakakhulu kukubona ukuzuza kwezi ziza. Ngaphandle kwezinga le-Alexa yindlela yokuxhamla kwiindawo ... nangona iindawo sele zivaliwe.
Alberto Santos Estevez uthi:
Into enomdla ngakumbi iya kuba kukubona ukuba inenzuzo njani la maqonga. Imodeli yokuxhaphaza utyelelo lixabiso eliyinyani lewebhusayithi ... nokuba zivaliwe.